Batman waa ciyaar Afyare ah oo uu soo ku salaysan Gotham ee City caan; waxa ay leedahay kala duwan oo kala duwan oo ah muuqaalada dhawra ciyaartoyda marti qaaday. Hel galay safar xiiso leh qof hanad iyo ha Knight Dark ka iftiiminaya aad nasiib. Waa ciyaar aad u qurux badan Afyare in la ciyaari karo on kiniiniyada, telefoonnada gacanta, desktops oo dheeraad ah. Haddii aad akhri waxyaabaha lagu qoslo oo markaas ku riyaaqay aad hubto in ay ku raaxaysan this ciyaarta booska theme ku salaysan madow.
Sida magaca Afyare soo jeedin, ciyaarta booska taas oo ku salaysan mid ka mid ah metelin atoorayaal ugu jeclaa halkan waa in ciyaartoyda siin lamoodaa la jecel yahay. Afyare ayaa loogu talagalay on madow ah, habeen roobaadka, theme ee ay gudcurka oo dhan waxay leeyihiin badan oo ku guuleystay jidkaaga soo socda. ka hor Tag oo ciyaaro this ciyaarta booska cajiib ah oo aan arko waxa aad u.
More on sameeysa ee Batman
naadi Batman Waxaa la soo saaray by ciyaaraha Series taas oo ah mid ka mid ah horumarinta ciyaaraha top in industry ee iGaming. Iyagu waa mid ka mid ah Horseedka ah iyo in la abuuro kulan casino in badi waxa wada tayada, ay u wada shaqeeyaan si ay u abuuraan ugu fiican ee ciyaartoyda inay ku raaxaystaan. Waxay sii wadaan in ay ka shaqeeyaan iyo samatabbixin kulan casino cusub lagu gartaa-abuurka.
Batman booska uu leeyahay 5 duntu iyo 50 paylines; size qadaadiic ah dhaxeysa ee u dhexeeya 0.01-1.00 iyo ciyaartoyda riixi kartaa batoonka wareejin mar bet ayaa kaalinta. Mar kasta oo dalalkan ciyaaryahanka tallaabadaas calaamadaha ka dib wareejin kasta, ciyaaryahanka loogu tixgalinayo doonaa guul. Waxaa jira fursado badan oo uu ku guuleysan abaalmarin sare leh this ciyaarta Afyare oo xiiso leh. Muuqan oo dhan characters ka qoslo, kasta uu leeyahay qadar shir sanadeedkii ah lamoodaa in aad maydhato ciyaartoyda la.
Ninka duubtay dibadeed ee Afyare oo ku badali doonaan characters kale si ay u buuxiyaan isku guusha. Haddii batman caawisaa buuxinta isku darka ah, ka dibna guul waxaa u labeeyay ciyaarta salka. kala firdhiso ayaa dhinaca kale, waxaa wakiil Guddoomiyaha Gordon iyo calaamadda this gayaysiin doona dib-u-dhigeeysa wareega iyo markii wareega tani ku dhacdo, oo dhan guul aad u labeeyay.
Maxay yihiin hadalladan aad weli sugaya? Ku degdegin inaad Coinfalls Casino oo isku day in aad nasiib la duntu of this hanad nin Afyare oo bal arag waxa batman ayaa aad u. geesigeeda The Dark badan ee abaal sugaya idiin; Hubi in aad gacmahaaga ka heli iyaga on.